musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Eddie Nketiah Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga, zita rake chairo ndi "Edward". Tinokupa iwe yakazara chinyorwa che Eddie Nketiah Nyaya Yemwana, Biography, Mhuri Zvikonzero, Vabereki, Upenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika pakuzivikanwa.
Tarira, Hupenyu hwepakutanga nekumuka kwaEddie Nketiah. CREDITS: SkySports uye Instagram
Ehe, iwe neni tinoziva Eddie wake maitiro ekutamba; kumhanya, kufamba uye kugona kupedzisa, imwe yakaita kuti vateveri vamufananidze neaimbova mutambi weArsenal Ian Wright (iye anopa chipangamazano). Nekudaro, vashoma vashoma ve abalandeli vanofunga shanduro yedu yeEddie Nketiah's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbokura, ngatitangei, neToC, ipapo Eddie Nketiah's Wiki pamberi pake FULL NYAYA.
Zita rizere: Edward Keddar Nketiah
Zita rekudanwa: Eddie
Zuva uye Nzvimbo yekuzvarwa: 30th yaMay 1999 uye Lewisham, London, United Kingdom.
Age: Makore makumi maviri (kubvira paFebruary 20)
kukwirira: 1.75 m kana 5.74ft
Best Mimhanzi Genre 72 makirogiramu
Favorite Artist: Lil Baby, Gunna uye D-Bhuroka Europe
Mhuri Kubva: Ghana
Chitendero: Pamwe ari muMuslim nekuda kwezita rake repakati "Kedari"
Basa: Nhabvu (Central Forward)
Bhora Idol: Ian Wright naT Thierry Henry
Vabereki: Mr naAmai Nketiah
Wana Sista: Ehe
Iva Nehama: Aihwa
Eddie Nketiah's Nyaya Yemwana:
Eddie Nketiah Dzidziso Yevechidiki
Kutanga kubva, mazita ake azere Edward Keddar Nketiah. Eddie akaberekwa pazuva rechimakumi matatu ra Chivabvu 30 kuvabereki veGhanian muLondon Borough yeLewisham, United Kingdom. Iye akazvarwa ari iye ega mwanakomana (wekupedzisira-mwana) wemhuri yake uye aine hanzvadzi mbiri hombe.
Eddie akapedza hupenyu hwake hwepakutanga kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLondon iri kumusha kune vamwe vafambi venhabvu; Ruben Loftus-Cheek uye Wright mhuri (Ian uye Shaun Wright-Phillips- dhimoni rekukurumidza). Kunyanya kukosha, iyo nzvimbo iyo mhuri yaEddie Nketiah yaigara (Lewisham) ndiyo imba yemuimbi weChirungu uye munyori wenziyo, Natasha Bedingfield.
Sezvakangoita vazhinji vemunharaunda yeguta (Lewisham), Little Eddie achiri mudiki akanakidzwa nechikwanisiro chekusafambisa unosimudza musoro kune anotarisisa ekuona eLondon mudenga. Inoratidzwa pazasi, iro guta Telegraph Hill akatarisira kuona kwake-kuona matambudziko.
Iye Chirungu mberi akakurira muLewisham paakanga achiri mwana. Chikwereti: Instagram
Eddie Nketiah's Family Background:
Tichifunga nezvechitarisiko chake, iwe unobvumirana nesu kuti midzi yemhuri yaEddie Nketiah inonyanya kutungamirwa kuenda kuAfrica. Chokwadi ndechekuti, Mukwikwidzi anorova ndeweGhanaan neWest Africa mhuri kubva nenhaka. Muchokwadi, vese vabereki vaEddie Nketiah (akafananidzirwa pazasi) ndiGhanans.
Sangana nevabereki vaEddie Nketiah vane mhuri yavo yakabva kuGhana (West Africa). Chikwereti:Daily Star
Eddie Nketiah Biography- Makore Ekutanga pamberi peBhora:
Eddie aive mwana wekupedzisira mumhuri yake akanakidzwa nekurapwa kwakanyanya kubva kuvabereki vake uye hanzvadzi dzakura. Semwana wemba, paigara paine mumwe munhu wekumubatsira kuti aite basa rake remumba. Kunyanya kukosha, pakanga pane rusununguko kwaari rwekusarudza zvaachaenda achiri mudiki.
Ari kure nemhuri yake kumba, vabereki vaEddie Nketiah (kunyanya baba vake) akamubvumidza kutamba nhabvu neshamwari kuLondon Nhabvu yakaravira South-kumabvazuva. Achitaura nezve chiitiko chake chekutanga nebhola, Eddie akambotaura zvinotevera paakabvunzwa GafferONLINE nezvekuti ndiani amuunza kunhabvu. Mumashoko ake;
“Aive baba vangu. Ndiye akatanga kurova bhora rebhora nezve neni kutenderera imba yangu uye mubindu remhuri yangu. Ipapo, ndakapedza izvi uye ndakatanga kutamba neshamwari dzangu ”.
Vechidiki venhabvu venhabvu vakanakidzwa nemakwikwi emitambo kunyanya aya ari pakati peLondon vana uye vekuNorthern vakomana (Gaffer Mishumo. Kunge Jadon Sancho, Josh Koroma uye Reiss Nelson, Eddie aive achibatikana mumutambo weLondon makwikwi evana. Kuremekedza hunyanzvi hwake mumigwagwa yeLewisham kuburikidza nemitambo yemitambo yakazoripa iyo mibairo sezvo zvakaita kuti Eddie mudiki atorerwe neChelsea FC academy.
Eddie Nketiah Mwana WeChinyorwa- Upenyu hweMabasa Ekutanga:
Chaizvoizvo mugore ra2008, mufaro wenhengo dzemhuri yaEddie Nketiah vaisaziva miganhu panguva yavo yekupfuura miedzo yeChelsea yekudzidza uye vakanyoresa kupinda mukirabhu yechikoro chedzidzo.
Ndiri muChelsea FC Academy, Eddie akatamba pamwe chete nenyeredzi dzechikoro like Mason Mount uye Callum Hudson-Odoi. (Ah! hauna 'kuziva izvozvo ?? !!. Maitiro ake ekutamba akaenzaniswa neaya Jermain Defoe, nekuda kwekufamba kwake uye kugona sharpshooting kubva kumakona ese. Kunyange zvinhu zvese zvaiita sekunge zviri kuitika mushe, Eddie zvishoma aiziva here kuti vamwe DZora MAMA kuuya kwake.
Eddie Nketiah Biography- Iyo Iyo Iyo Inorema nzira ku Mukurumbira Nyaya:
Iyo Chelsea Academy Kurambwa:
Munguva yemazuva a Didier Drogba, yakanga iri mishumo nezvetarisiro hombe yakaiswa pane vechidiki veChelsea. Zvakare sezvawakanzwa, vazhinji vavo vanokandirwa kunze kukwereti mushure mekutya kusazoita kuchikwata chemakwikwi chekutanga. Panyaya yaEddie Nketiah, dambudziko guru raive rekushoropodzwa kwekuvapo kwake chaiko semurwiri.
Zvinosuruvarisa, wechidiki wechidiki weprodigy sevamwe veanodzidzira naye matanho akawira pasi kurambwa. Eddie haana kana kutumirwa pachikwereti ASI akarambwa uye akaburitswa neChelsea mugore ra2015.
Vabereki vaEddie Nketiah, vemhuri uye shamwari dzepedyo vakamunyaradza panguva yake yekuedza. Chaizvoizvo, any mwana akararama kuburikidza nedzidzo kuramba achangoziva chete zvakanyanyisa kurwadziwa kwepamoyo uye inokuvadza maitiro epfungwa aungave nawo. Marwadzo ekurambwa akaita chikamu chakakosha cheupenyu hwaEddie Nketiah, uyo waaisazombokanganwa nekukasira.
Eddie Nketiah Biography- Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Vanzwisisa chishuvo chemukomana wavo wekutamba nhabvu yekuzviraramisa, vemhuri yemhuri yaEddie Nketiah kunyanya baba vake vakaita zvese zvavaigona kuti vadzose kuzotamba kune imwe kirabhu. Sezvineiwo raizove naro, Arsenal FC yakanhonga mukomana mudiki ndokumupa kudzidza bhora vhiki mbiri chete mushure mekunge Chelsea yamuramba.
Kubva abatana neArsenal, Eddie haana kumbobvira akatarisa kumashure sezvo akatanga kufadza varairidzi vake. Akaratidza kunakisa kusanzwisisika uye chimiro chakatsunga, icho chakaunza hunhu hukuru mukati make uye nechishuwo chekuverengera. Nezvekusimuka kwake, chekutanga, mudiki akabatsira timu kuti ikunde yake yekutanga nhabvu nhabvu kukudzwa- Iyo Premier League 2 mukombe.
Eddie akabva angoguma adzoka neArsenal mushure mekurambwa neChelsea FC academy. Chikwereti: Instagram
Kutevera Arsenal academy kudzidza, Eddie akatanga kuwana meteoric yekukwira pamwe nekirabhu. Chimwe chiitiko chakakura mukukwira kwaEddie Nketiah pabasa rakasvika muna 2018, iro gore raakabatsira shamwari yake yeEngland U21 kukunda muhoro Toulon Mutambo.
Panguva iyi, Eddie akanzwa zvinhu zvitatu mupfungwa dzake. Chekutanga chaive chakeYechidiki Mission yakaitwa". Wechipiri waive wakeNhabvu Replication yakanga yaiswa", Uye wechitatu kwaive kunzwa kuti"Destiny yakununurwa chikamu". Inotarisirwa pakati peavo vakasimudza mukombe inosanganisirwa; Hamza Choudhury, Kyle Walker-Peters, Fikayo Tomori, Tammy Abraham uye Tom Davies.
Kuhwina Toulon yemitambo ye 2018 kwaireva zvese kuna Eddie. Chikwereti: Twitter
Panguva yekunyora Eddie Nketiah's biography, iye zvino anoonekwa seakawanda kwazvo muzuva razvino-kumberi, iye zvino ari kuzadzisa yake yepamusoro nhabvu nhabvu. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Eddie Nketiah ndiani Musikana?… Ane Mukadzi kana Kid (s)?
Nekubudirira kwese kwakawanikwa achiri mudiki, zvine chokwadi chekuti vazhinji vechirungu neArsenal fan vanofanirwa kunge vakatanga kufunga kuti musikana waEddie Nketiah angave ani. Zvikuru kudaro, kungave kumberi kuroora, (une mukadzi? kana mwana?. Ehe!, Hapana kuramba chinhu chekuti ruoko rwaEddie runako.beche rake kumeso + kwepink miromo) hazvingamuite iye A-Lister kune vangangoita vasikana uye Britain / African mukadzi zvishandiso.
Vazhinji vateveri vakabvunza… Ndiani musikana waEddie Nketiah? Chikwereti: Instagram
Mushure memaawa mazhinji ekutsvakurudza kwakanyanya pawebhu, tasvika pakuziva kuti mutambi haana kuita hukama hwake pachena (paruzhinji) panguva yekunyora. Parizvino, yake Eddie Nketiah's social media account (Instagram, Facebook, Twitter) haaratidze kubatanidzwa kwake chero munhu. ASI, zvinogona kuti ari kufambidzana nemunhu muchivande ...ndiani anoziva?…
Eddie Nketiah Mararamiro (Iyo Guru Guru):
Kusvika pakuziva Eddie Nketiah's Mararamiro aizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo wakakwana weyekugara kwake mamiriro. Kana wanga usingazive (pamwe nekuti iwe uchangobva kuMars), Eddie mumwe munhu anonyatsoziva nzira yekuisa yake $ 16,426 pavhiki muhomwe mune kumwe kushandiswa kwakanaka. Tarisa mugwagwa wake unotonhora !!.
Iyi ndiyo Eddie Nketiah Mota
Pamararamiro aEddie Nketiah, mukomana wechiChirungu haana nyaya dzekutendera nyika kuti ione chikamu chehupenyu hwake. Maererano ne GafferOnline, Eddie akamboti akapenga asi haaratidze yakawandisa yacho. Mumashoko ake;
“Ndinoda kuti nditi ndakatsikirirwa kwazvo, asi kwete kupisa zvakanyanya. Ini ndoda kungoita kuti zvinhu zvidzikame uye zvidzore.
Ndiri muzvipfeko zvangu zvakanyanya, ndichigara ndakatarisa mumhando nyowani, iwe unofarira kuchengetedza zvinhu zvakapfeka zvakanaka.
Eddie Nketiah's Hupenyu Hwega:
Eddie Nketiah ndiani?… Chii Chaimuita Tick?…. Kutanga kuenda, iye munhu anonzwa akasununguka mune yake yega nzira yekuratidzira obva aine maitiro ekutaridzika akajairika (kunge wechidiki weLondon wechidiki). Eddie mumwe munhu anogara achivavarira kukura kwake, pese uye pakare pakare.
Uyezve paupenyu hwaEddie Nketiah, ane hunyoro kune wese waanosangana naye zuva rese, achinyatso kuziva nezvekukura uye achida kudzidza zvishoma nezvepasi rakamukomberedza.
Eddie Nketiah Hupenyu hweMunhu. Iye anoda kudzidza nezvepasi rakamukomberedza uye, afarire uye wake chipangamazano. Chikwereti: IG
Kuna Eddie, kutamba mitambo yemakomputa uye kudzidziswa nechidhori chake zviratidzo zvekugara zvakanaka. A kure kubva munhabvu, anoshandisa nguva yakanaka nemukurumbira Arsenal Legend- Ian Wright. Asides the legend, Eddie akadzidzawo kubva Thierry Henry, imwe yeIdol yake. Mumashoko ake;
"Pandakakura, Ian Wright ndiye murume wandaitarisisa kwaari, uye ndakagara ndichive mutambi mukuru weArsenal kunyangwe iwe waive muChelsea."
Eddie Nketiah's Hupenyu hwemhuri:
Nekuda kwaEddie kuberekwa muEngland asi aine mhuri yekuGhana yemhuri uye nhaka, iyo hondo yekuwana mutsigiro wake inofanirwa kuve inonakidza. Muchikamu chino, tichawedzera kujekesa pane nhengo dzemhuri yaEddie Nketiah kutanga nevabereki vake.
Zvimwe nezvaBaba vaEddie Nketiah:
Iyo baba yepamusoro ndiyo yekutanga yekuonana chero zvinhu zvikaenda zvisina kunaka kumwana wake wekupedzisira wekupedzisira. Kwemakore apfuura, baba vaEddie Nketiah vakadzidzisa tsika mavari, izvo zvakakanganisa maitiro avo paupenyu. Eddie akambotaura sekureva GafferOnline, kuti chiitiko chekushivirira uye ruzivo nezvekugadzirisa zvipinganidzo zvese zvakauya kubva kuna baba vake vane ruzivo.
Zvimwe nezvaEddie Nketiah's Mum:
Vanamai Vakuru vakabereka mwanakomana kwaye uye amai vaEddie Nketiah havasiyani. Sezvo ari iye chete mukomana uye wekupedzisira mwana wemhuri yeNketiah, Eddie akambotaura kuti anowana kurapwa kwakakosha kubva kuna mai vake. Uyu ndiwo mutengo wake wekuva kadhi rake rekupedzisira uye mucheche weimba. Amai vaEddie Nketiah ndivo vane chekuita nehunhu hwakanaka hwemwanakomana wavo, uhwo hwavanoti hwakanganisa maonero avo nezvehupenyu.
Zvimwe Zvakawanda nezvaEddie Nketiah Masisita:
Maererano ne GafferOnline, Eddie akambotaura kuti kuva nemhuri ine hanzvadzi dzinoyevedza zvechokwadi kunoita mhuri yake "Tight Knit". Ehe! semwana wekupedzisira mwana, vanin'ina vake vanomubatisa pese uyezve, Eddie anozvida uye anoti achiri mukutonga kwakasimba (GafferOnline Report). Zvakangodaro, vese vari vaviri hanzvadzi dzaEddie Nketiah vagara vachimutsigira, uye mutambi wenhabvu haamboregi kunetsekana kuti ane chikwereti chakadii kwaari.
Eddie Nketiah Chokwadi:
chokwadi #1: Kuparara Kwake
Kubva pakubudirira kwake, vateveri vazhinji vakabvunza mubvunzo uyu; Eddie Nketiah anowana marii?. Mugore ra 2017, chibvumirano chemberi chakamuona achihwina mubairo wekupfuura £800.000 pagore. Chimwe chinotishamisa pazasi ndechedhi yaEddie's Nketiah muripo pagore, mwedzi, zuva, awa, miniti uye masekondi.
SALARY BREAKDOWN IN EURO (
Chaanowana pagore £ 808,155 € 900,000
Chaanowana pamwedzi £ 67,346 € 75,000
Chaanowana paSvondo £ 16,426 € 18,293
Chaanowana pazuva £ 2,208 € 2,459
Chaanowana paHora rimwe £ 92 € 102
Chaanowana pamaminitsi £ 1.53 € 1.71
Izvo zvaanowana pamasekondi maviri £ 0.03 € 0.03
Uku ndiko kuwana kwakaita Eddie Nketiah kubva pawakatanga kuona peji ino.
Kana izvo zvaunoona pamusoro zvikaverenga (0), zvinoreva kuti uri kuona peji AMP. ikozvino Click HERE kuti awone muhoro wake zvichikwira nemasekondi. Waizviziva here? Wepakati murume muUK anofanira kushanda kweanosvika 2.2 makore kuti awane mari £ 67,346, inova iyo Eddie Nketiah anowana mumwedzi mumwe.
chokwadi #2: Nezve yake "DADAI" Rariro Yechinangwa:
Kwakatangira Eddie Nketiah's CALL ME Goal Celebration. Image Chikwereti: GafferMagazine uye FourFourTwo
Kana achibvunzwa nezve GafferOnline, Eddie akabvunzwa nezve mukurumbira wake chinangwa chemhemberero yainzi 'achidana'. Mumashoko ake;
“Mhemberero yangu yekufona yakatanga panguva ye pre-mwaka neArsenal iyo yasvika nguva yadarika.
vachisvika paminiti yekupedzisira, tanga tichidhidha pakatarisana neBayern Munich. Ndakaerekana ndarova pasi pakarepo ndisina kubata bhora zvakanaka.
Mushure memutambo uyu, vezvenhau veArsenal vakafona vachiti: 'KANA iwe uchida chinangwa? Zvirinani kufonera Eddie !!."Mhemberero yekutandarira ichangobva ipapo."
chokwadi #3: Eddie Nketiah Chitendero:
Tichitarisa nezita rake repakati "Kedari", pane mukana wekuti vabereki vaEddie Nketiah vanogona kuve maMuslim. Waizviziva here? Kedari zvinoreva kutiSimba”MuchiArabic, uye izita rechiArabhu reMuslim rakapihwa mwanakomana wechipiri waIshmael. Usakanganwe zvakare kuti Kedari muzukuru waAbhurahama naHagari. Nekudaro, zvinogoneka kuti nhengo dzemhuri yaEddie Nketiah VaMuslim nechitendero. Ivo havasi maKristu sezvo vazhinji vangafunga mafunga.
chokwadi #4: Eddie Nketiah's Tattoos:
Pakupedzisira pane Eddie Nketiah's Fact ndiyo hurukuro pamusoro pake naTattoos. Chokwadi ndechekuti Eddie haatendi muna "Tsika yeTatoo", Dingindira rinozivikanwa kwazvo mumazuva ano emitambo. Anorova 5.74ft anorwisa panguva yekunyora haanzwe kudiwa kwekuve neinks dzemhuri yake, musikana uye rake ramangwana vana sehunyanzvi hwemuviri.
Eddie haana nguva yeTattoos. Kutonga kubva pamufananidzo uyu, ari Ink akasununguka panguva yekunyora. Chikwereti: IG
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Eddie Nketiah Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.